WordPress.com? Hezvino chikonzero nei ndaizoshandisa iyo kutanga. | Martech Zone
WordPress.com? Hezvino chikonzero nei ndaizoshandisa iyo kutanga.
Chitatu, Kurume 13, 2013 China, Kurume 14, 2013 John Blue
WordPress ndeimwe yemakuru blogging mapuratifomu inowanikwa uye inouya nenzira mbiri, WordPress.com uye WordPress.org.
Fomu yekutanga, WordPress.com, ibasa rekushambadzira iro rinopa mahara uye anobhadharwa maturogi ekublogi (uchishandisa WordPress hazvo) pawebhu. WordPress.com inoshandisa iyo software sebasa modhi (aka SaS), kuchengetedza mablogging software zvishandiso uye kutarisira zvinhu zvakaita sekuchengetedza uye zvemukati zvekutumira (bandwidth, kuchengetedza, nezvimwewo).
Fomu rechipiri, WordPress.org, inharaunda inobatsira kuvandudza nekuchengetedza iyo open source shanduro yeiyo WordPress software. Yese yeiyo WordPress blogging chishandiso inogona kutorwa pasi uye kuiswa kune komputa, server, kana inomiririra mupi wesarudzo yako. Iyo setup iri mumaoko ako uye iwe une basa rekupa inodiwa chengetedzo uye zvemukati kuendesa.
Sei ungasarudza imwe pamusoro peimwe?
Ngatitangei nei WordPress.com kutanga. Rangarira, ivo vanopa iyo software yakagadzirira kuenda seblog. Iyo setup yauri kutarisira, kana uchida, iri kuronga kutaridzika kweblog yako. Zvinhu zvakaita semusoro kana dhizaini zviripo kuti iwe uronge. Pane zvisirizvo uye WordPress.com inopa mazano. WordPress.com inopawo yakanaka saizi seti ye Widgets uye plugins, ayo ari mini-blogging maturusi anowedzera maficha uye mashandiro kune yako blog. Semuenzaniso, iwe unoda indekisi yezvakaitika blog blog? Pane iyo Archive widget. Unoda kuratidza ako ekupedzisira mafoto kubva kuFlickr? Iko kune Flickr widget.
WordPress.com iri zvakare bhizimusi rekutengesa, richipa zvimwe zvinhu kuti ubatsire kusimudzira yako blog. Izvi zvekuwedzera zvine mutengo, kunyange zvisingadhuri zvachose, uye batsira kuvaka yako blog zvakanyanya. Semuenzaniso, madingindira ekutanga anonakidza zvakakwana kuti utange kublogi. Asi kana iwe uchida zvimwe zvinoonekwa kana dhizaini kuti unyatsoenderana nechitaira chako, ipapo ungangoda kutenga iyo premium theme.
Paunotanga blog paWordPress.com, mune yemahara vhezheni, iwe uchagamuchira zita rezita rinotaridzika seizvi: yako-blog-name.wordpress.com. Semuyenzaniso: farmbrownays.wordpress.com. Kuti uve neasina-wordpress.com zita rezita, iwe uchafanirwa kukwidziridza sevhisi yako kuti ushandise tsika domain zita.
WordPress.com iri, zvakare, bhizimusi rekutengesa kuti vagone, nguva nenguva, kumhanya kushambadza pane emahara blog saiti. Iwe unogona kudzivirira kuti izvo zvirevo zvionekwe pane yako blog nekutenga iyo Kukoshesa Musumbu. Iyo Value Bundle zvakare inopa yekuwedzera nzvimbo (yakakosha kana iwe uine yakawanda mifananidzo), inokutendera iwe kuti iwe uve netsika yenyaya theme, uye yakasarudzika domain zita.
Pane zvimwe zvinorambidzwa pakushandiswa kweWordPress.com iwe ungangoda kufunga nezvazvo. Uchishandisa chero plugin yaunoda hazvigoneke kana WordPress.com isati yatopa yavo yepamutemo sevhisi. Semuenzaniso, iwe unoda kushandisa iyo SexyBookmark pfekera? WordPress.com haina SexyBookmarks sechikamu cheiyo yepamoyo plugin sevhisi. Unoda kushandisa iyo InoteveraGen media management plugin? Izvi zvakare hazvisi chikamu cheiyo yepamoyo WordPress.com plugin suite.
Izvi hazvireve kuti WordPress.com haina zvekugovana zvinongedzo (ivo vanoita, ona Kugovana) kana manejimendi manejimendi (iyi zvakare vane, maona Raibhurari yemabhuku). Icho chikonzero icho WordPress inorambidza kushandiswa kwemapulagini imhaka yekuti plugins isoftware iyo inofanirwa kuchengetwa nekufamba kwenguva kuona kushanda kweWordPress.com sevhisi. Kubvumidza chero plugin kunogona kukonzera iyo WordPress.com sevhisi kuti itadze uye, mukuita, kukonzera nyaya neako blog.
Nei uchishandisa WordPress.com? Chikonzero chikuru ndechekuti mutengo, ungave wakasununguka kana iwo maburi eprimiyamu, wakadzikira pane kuve wekugamuchira uye kuchengeta yako wega WordPress.org saiti. Funga nezve izvo zvinopihwa neWordPress.com, mune yavo yemahara vhezheni: blogging chikuva chakagadzirira kuenda pane yewebhu server yavanogadzirisa uye vanochengeta. Uye zvemabhuru epuriyumu, anodhura kubva $ 99 kuti $ 299 (UPDATE 2013 03 13: $ 99 kusvika $ 299 pagore), ivo vanotora pabasa, nguva, backups, uye kuyedza kuverengera blog yako kuwanikwa uye kuzivisa vateereri vako. Iwe unogona ipapo kungotarisa kublogi, kutsvaga iwo anonakidza mazano uye kugovana iwo nevamwe.
Ko zvakadii WordPress.org, yakazvimiririra yakachengetwa WordPress? Nezvese zvataurwa pamusoro apa paWordPress.com, nei iwe uchida kunyange kurodha pasi uye kumisikidza WordPress mune yako yega chikamu cheInternet?
Chikonzero chikuru vanhu vazhinji vanoita izvi ndechekuti kuwanda kutonga. Mapulagi nemajeti echisarudzo chako anogona kushandiswa. Semuenzaniso, kana iwe uri mutori wemifananidzo uyo anoda kugadzira mapikicha emifananidzo ebasa rako ipapo NextGen media plugin ndizvo zvaunoda. Kana, kana iwe uchida kunyatsogadzirisa kutaridzika nematafura epasi senge Thesis or Genesis, ipapo WordPress.org ndeyako.
Kana iwe uchida kumhanyisa ako wega kushambadzira, wega wakapihwa WordPress ndizvo zvaunoda. WordPress.com haibvumire munhu kumhanya zvakabatana ads kana mamwe akafanana maratidziro (ona chinyorwa pa kushambadza).
Yega yakachengetwa WordPress inopa zvakanyanya kuchinjika kana zvasvika pakuseta nekugadzirisa. Nekudaro, neicho chinja chinouya mutoro. Iwe une basa rekubata (semuenzaniso pane sevhisi senge BlueHost), blog software yekuchengetedza pazvinenge zvichidiwa (mbeu posvo pa upgrading), Uye backups.
Ndeipi yekutora? Kana iwe uri bhizinesi ndichingotanga blogging ipapo ini ndaikurudzira WordPress.com uye tarisa kukudziridza yako blog senge tsika. Icho chikonzero cheichi ndiko kukosha kwenguva yako: unoda here futz (fancy term for waste time) kutenderedza? Chinangwa chako ndechekutaurirana nevateereri, vatengi vako, nguva dzose. Iko mutengo wekutanga, kunyangwe neiyo premium package, yakaderera kana ichienzaniswa nenguva yako.
Uye kana usiri bhizinesi uye uchingoda kusvika kublogga, iyo WordPress.com yemahara modhi iri nyore chaizvo kutanga. Zvekare, haufanire kuita futz, ichikubvumidza iwe kuti utarise pane izvo zvirimo uye tsika yekubloga.
Mushure memwedzi mitanhatu, kana zvakadaro, yekubloga (vhiki nevhiki, handiti?) Ungangoda kushanyirazve kushandisa kwako WordPress.com. Funga nezve bhizinesi kana bhurogu zvakakosha zvinodiwa zvisati zvasangana. Uine izvo zvisina kukwana zvinodiwa mupfungwa iwe unogona kutora danho rekutamira kune wega wakachengetwa blog kana kwete. Uye (heino chinhu chakanyanya kusarudzika) kutama kubva kuWordPress.com kuenda kuWordPress.org kwakanaka akananga kumberi. Zvinoda kuronga uye kuyedza asi maitiro acho anozivikanwa.
Tags: raionekwaWordPresswordpress hostingwordpress.com
Iyo Autoresponder Gungano Mutsetse
Sei Usingaite Kuti Unetseke Nezve Zvemukati Kushambadzira
Ndinofanira zvachose, 100% handibvumirani newe pane ino, John! 🙂 Iwe wakaratidza kuti kutonga kwaive kuderera kwekutambira paWordPress.com - hazvisi zvekungodzora zvemajeti uye madingindira uye kushambadzira. Izvo zvakare kutonga kwekugadzirisa uye caching. Saiti inozvibata pachako pa WPEngine ine zvivakwa zvine simba kwazvo, manejimendi manejimendi, chengetedzo yekutarisa, backups, nzvimbo yekuratidzira, redirect manejimendi manejimendi, yemukati mekutakura network, mamiriro ehunyanzvi caching system, mukana kune midzi midziyo, madhairekitori evashandisi… zvese zvisingasviki $ 99 pamwedzi. Usatorere yako WordPress kumisikidza nekuiisa paWordPress.com - zvirokwazvo kutambisa nguva.
Ini ndinofanira kubvumirana naDoug pane iyi futi. Mukupedzisira, ingangove isiri iyo yakawanda yekunetsa kuenda neimwe pamusoro peimwe kana zvese zvasvika kwazviri, asi iwe unowana zvakanyanya kudzora kana iwe uchienda unozvibata wega-nzira. Zvino, kana mumwe munhu arikuda kuongorora WordPress uye "kukanda matai" sekutaura, saka gadzira yako wega saiti pane .com mhinduro kana iwe usiri kuda kushandisa chero mari. Zviri nani kwazvo kupfuura Blogger, asi kana iwe uchinyanya kuve wakakomba pane zvauri kuita online. Enda ne .com mhinduro, uye chero munhu anoda rubatsiro rwekugadzirisa zvinhu uye kugadzirirwa ivo, ingo ndiudzei.
Uyewo, WP Engine (aff link), ikozvino ine $ 29 / mnth sarudzo kune imwe saiti. Basa guru, rutsigiro rukuru.
Jun 25, 2013 pa9: 59AM
ichi chinyorwa chikuru!
ndatenda neruzivo! will share…